ITS Galaxy ithi ayizukuthuswa izihlwele – Bayede News
ITS Galaxy ithi ayizukuthuswa izihlwele
ITheku lizoba yinkundla yezemidlalo kule
UZakhele Lepasa uthi abayisabi iChiefs
ITheku lizoba yinkundla yezemidlalo kule mpelasonto ngokuvula ngomdlalo wowamanqamu eMabhida
KUBATHANDI bakanobhutshuzwayo iTheku yiyona ndawo abangayihambela kule mpelasonto njengoba lizophenduka inkundla yobumnandi kusuka emdlalweni wamanqamu weNedbank Cup phakathi kweKaizer Chiefs neTS Galaxy edlala esigabeni iNational First Division (NFD) ngakusasa ngeSonto kubanjwe indumezulu yokuklomelisa abadlali abenze kahle kuPSL, kanti emini kuzoba nomjaho onedumela ohanjelwa nayimindeni iDiscovery East Coast Radio Big Walk eMoses Mabhida. Lo mjaho uhlukene ngezigaba zamabanga kusuka kumakhilomitha amahlanu kuya kwangama-20.
Leli qembu liqophe umlando ebholeni eNingizimu Afrika ngokufinyelela esigabeni sowamanqamu wesicoco esikhulu linezinyanga eziyisi-9 vo lasungulwa. Uma kungaya ngokuzimisela nangezifiso zabadlali balo linqobe enkundleni iMoses Mabhida ngoMgqibelo kusihlwa kuyosho ukuphinda umlando. Ngakusasa ngeSonto eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre kuleli dolobha kuzobanjwa umcimbi wemiklomelo yamaPSL Sports Awards.
Lapha kuzoklonyeliswa abadlali abenze kahle emikhakheni ehlukekene yezemidlalo kuze kuyoshaya nakubabhali nabethuli bezinhlelo zebhola. Ngaphansi komklomelo womdlali ovelele kule sizini kuqokwe uThemba Zwane, uHlompho Kekana beMamelodi Sundowns noThembinkosi Lorch we-Orlando Pirates.
Kumqeqeshi wonyaka kubanga uPitso Mosimane weMamelodi Sundowns noMilutin Sredojevic we-Orlando Pirates noBenni McCarthy weCape Town City. Amathikithi omdlalo wangoMgqibelo adayiswa aphela kungakapheli nesikhathi esingakanani eqale ukudayiswa. Umqeqeshi weTS Galaxy uDan Malesela uthi abadlali bakhe bazimisele ukuqopha umlando. Amathemba awo iTS Galaxy izobe iwabeke kumgadli wayomosemncane ovutha engabaselwe kulezi zinsuku uZakhele Lepasa.
Lo mdlali oneminyaka yobudala engama-22 uzoya kulo mdlalo enamathuba amaningi okuthatha umklomelo wokuhlohla amagoli amaningi, njengoba enamathathu kulo mncintiswano. wafaka amagoli amabili emdlalweni owandulela owamanqamu betholene phezulu neLamontville Golden Arrows eThekwini. Uqokelwe nomklomelo womdlali ovelele kule sizini ephelayo kuNational First Division
“Ngifuna ukuvala umncintiswano weNedbank ngegiya eliphezulu uma kungenzeka ngihlohle amanye amagoli ukuze ngandise isibalo sawo bese siphakamisa indebe ye yeNedbank. Nginomdlandla nomfutho njengoba iqembu selize lafinyelela kulesi sigaba, futhi wonke umuntu ekhempini ufuna ukuqopha umlando,” kusho uLepasa. Uthe angeke bakuvumele ukungenwa yitwetwe labalandeli beKaizer Chiefs abazobe begcwele inkundla kwazise amathikithi alo mdlalo adayiswa aphela.
“Akuyona into esikhathazayo ngoba sikujwayele ukudlala phambi kwabantu abaningi uma sidlala imidlalo yasekhaya esigabeni iNFD, noma kulokhu kuzoba yisimo esehlukile”.